कथा : समाचार भएको एउटा कथा - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : कठैबर….
कविता : समय →
कथा : समाचार भएको एउटा कथा
कती पटक पढियो : 53
झोला बोकेर उड्नु अघि उसले एउटा चिटिक्क परेको सानो घर बनाएर बाउआमालाई सार्यो । रिन त उसले गएको ३ महिनामै ब्याज सहित तिरिसकेकै थियो त्यसमाथी आमालाई अलिकति” पकेट मनि” पठाईदियो । आमा खर्च त गर्दिन थिईन तर पुरानो मखमली थैलिमा पाँच हजार दाम बोक्न पाए बिछ्ट्टै खुशी हुन्थिन भन्ने उसलाई थाहा थियो ।
गएको छैटौं महिनामा सर सापटी गरेरै भएपनि बैनीको बिहाको लागि नब्बे हजार दाम एकमुष्ट पठायो । असारमा खेती खर्च भनेर दस हजार पठायो । असोज सम्ममा सापटी तिरिसकेर पनि दशैलाई पन्द्र हजार खर्च पठायो । मंसिरमा साथी छुट्टी जाँदा नयाँ ज्वाँईलाई सामसुङ मोबाइल, बालाई घडी, आमालाई होल्यान्डको लुङी पठाईदियो ।
अनि साथमा आफू आउँदा घरमा दुईवटा ब्लान्केट र एल्सिडी टिभी ल्याउने समाचार पनि पठायो । नभन्दै उसको पनि जाने दिन आयो र भने भन्दा पनि ३ तोला सुन थप गरि उ बिहा गर्ने दाउले दशै कटाएर मंसिरमा घर पुग्यो । मंसिरको दोश्रो हप्ता एउटी चिटिक्क परेकी नब दुलही नयाँ घरमा भित्र्याएपछि भने उ ब्युँझियो …………….. ब्युँझिदा उ खेतको बिचमा माटाले बनाएको पुरानै घरमा ब्युँझियो । साठी कटेकी आमा उसैगरी मल थिएन । सत्तरी कटेका बाउ उसै गरि हलो जोत्तै थिए। गरिबीको अपहरणमा परेर रहर र चंचलता गुमाएकी किशोरी बैनी उसरी नै निरस आँखा लगाएर झोल हाल्नलाई आलु ताछ्दै थिई ।
पासपोर्ट बनाएर दलालका हातमा दिएका दिन देखि उसको कामै सपना देख्नु र नभएको आम्दानीको हिसाब गरेर “बजेट बिनियोजन” गर्नु भएको छ । घरखेतको काममा फिटिक्कै जाँगर चल्न छोडेको छ । आलस्य भएको ज्यान घरी घरी दिउसै निदाउछ र सपना देखि हाल्छ ।
दुई बर्ष भयो पासपोर्ट जिम्मा लगाएको । साउदी,कतार , दुबई ,बहराईन,मलेसिया कुनै देश पेस्न बाकी छैन । स्काफ फोल्डर, पेन्टर, कुक, वेटर, इलेक्ट्रीसियन, सेक्युरिटी, क्लिनर कुनै काम छैन जान्न भनेको तर भिषा लाग्दैन । आमाको भएको एउटा तिल्लौरो जाकटी राखेर दस हजारमा बनाएको पासपोर्टको म्याद गुज्रना लागिसक्यो , पैसाको ब्याज बढेर पन्द्र हजार भयो तर भिसा लागेको छैन । दलाल जहिले सोधेपनी अबको एक महिना भित्र भन्न छोड्दैन !!
नभन्दै उन्तिसौ महिनापछि त्यो एक महिना आयो । नौसय रिगेंट बेसिक, खान बस्न सहित ओभरटाईम गरेर चौध सय ग्यारेन्टी भयो । खर्च डेडलाख लाग्ने भयो । चालीस हजार कमाई हुँदा छेलोखेलो खाएर र जोहोरबारु घुमेर पनि सावाँ र ब्याज सहित पाँच महिनाको कमाई !
बाउआमाको हातको टीका लगाएर उ बाटो लाग्यो । बाटो लागिरहदा सधै सपना शून्य उसका बाउआमाका आँखामा धिपिक्क धिपिक्क सपनाहरू बलिरहेका थिए । तिनै सपनाहरूमा आफ्ना सपनाहरु मिसाएर एउटा ठुलो सपनाको बोझ बोकेर उ काठमाडौ ओर्लियो । त्यहाँबाट उ प्लेनमा बसेर हेर्दाहेर्दै काठमाडौ खाल्डोलाई धेरै तल छोडेर भयानक उचाई लिएर उड्न थाल्यो ।
कुनै मेहनती किसानले बादलको खेती गरेजस्तो देखिने आकाशको बाटो हुँदै सेताम्मे बादलहरुसंग बिच बिचमा लुकामारी खेल्दै आँखा झिमिक्क सम्म नगरी उ मलेसिया अवतरण भयो । एयरर्पोर्टमा तिन दिन सम्म पानी र पाउरोटी खाएर कटाएपछि बल्ल उसलाई लिन कम्पनीको मान्छे आएको थियो ।
अनि क्वालालम्पुरका चिल्ला र फराकिला सडक हुँदै आकर्षक शहरको बिचैबिच गुडीरहदा उसले तिन दिनको भोक थकान र निरासा सबै भुल्यो । शहरकै कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा कुखुराका तारेका साँप्रा, पाउरोटी र चिसो कोला खाएपछि त झन उसलाई मज्जाले निन्द्रा लागेर आयो । उ फुस्स निदाउनु अघिसम्म क्वालालम्पुरका विशाल र अग्ला घरहरू उसका मधुरा हुँदै गरेका आँखाबाट सट्ट सट्ट कटिरहेका थिए ।
निकैबेरको मिठो निन्द्रा पछि ब्युँझदा उ घना जंगलको बिचमा काठले बेराबारा गरेको कुनै दुर्गम र बिचित्रको ठाउँमा आईपुग्यो । ठाउँ बिल्कुलै दन्त्यकथामा बर्णन गरिएको एकादेशको कुनै गाउँ जस्तो थियो । मानिस र भाषा पनि एकादेश कै थिए । एक समूह चिम्सा आँखा, छोटो कद र लिखुरे जिउ ज्यानका छ्न ।
अर्को समूह भयंकर काला , बल्ढ्याङग्रे र राता आँखा गरेका अग्ला र मोटाघाटा भिमसेन जस्ता छ्न । उसले सुनेको थियो भियतनामी र तमिलहरु यस्ता हुन्छन् भनेर । सुनेका कुरामा देखेका कुरा दाँजेर हेर्दा उसलाई यी तिनै भियतनामी र तमिल हुन भन्ने कुरामा शंका रहेन । छालाको रंग र आँखाको आयतनमा भएको अलि अलि समानताले गर्दा उ भियतनामीहरुको कोठामा पर्न गयो । बाहिर पट्टिको छेउको भान्सा उनिहरुको साझा भान्सा भयो ।
भोलिपल्ट बिहानै उसलाई सुई लगाईयो । बिषालु सर्प ,बिच्छी आदिले टोके पनि अब उ नमर्ने भयो । पहेँलो र चम्किलो ड्रेस दिईयो ताकी उ जंगलको बिचमा परबाट प्रष्टसंग देखियोस र सुस्ताउन, अल्छी गर्न , घर सम्झेर रुन र टोलाउन नपाओस । यति गरिसके पछि बिहान लाल चियासंग निस्तो भातको नास्ता लिएर उसले त्यो दिनभरी नै चिन्ह लगाईदिएका रुखहरु काट्दै हिड्यो । दिउँसो एकैछिनलाई जंगली सागको झोलसंग मुछेर भात खाने समय बाहेक साँझ झमक्क नभइन्जेल उसलाई त्यसै गराईयो । उसले त्यसै गर्यो ।
साँझ तमिलले थापेको सानो दोकानबाट दालचामल, आलुप्याज, र नुनतेल किन्यो उसले । तलब आएपछि तिर्न मिल्ने चलन रहेछ । जानी नजानी जिबनमा पहिलोपटक आफै भान्से भयो। भात गिलो भएछ , दाल काचो अनि सब्जी डडेछ । आधा खाएर उ निरस मन, थकित ज्यान र भोकै पेटले गर्मी नै भएपनि सिरक ओडेर सुत्न खोज्यो ।
तर आँखा चिम्म गरिसक्दा सिंगो गाउँ उसको आँखा अगाडी झल्झल्ती नाच्न थाल्यो । आमाबाबु , बैनी, साथिभाई, छेउको खोलो, चौतारीका बरपिपल,गाउँको छुम्मे कुकुर, यहाँ सम्मकी खरबारी डडाउदा जलेको रुखको ठुटो सम्म उसको स्मृति भन्दा बाहिर परेन । ती सबै सम्झेर उ सिरक भित्र आधारात सम्म रोयो र कुनबेला निदायो उसलाई पत्तै भएन
भोलिपल्ट देखि उसको काम र दैनिकी मिलको फित्ता झै एकनासले त्यसरी नै घुमीरहयो । केही दिनपछि गाँउघरको न्यास्रो अलि कम भयो तर थकान निरासा र एक्लोपना भने कम हुन सकेन ।
बल्ल बल्ल एकजुग बिते जसरी महिना बित्यो र हातमा लेबी कटाएर सातसय रिंगेट पर्यो । तिनसय रासनको तिर्यो र सय रिंगेटको रिचार्ज गरेर घरमा लामो कुराकानी गर्यो । सबैभन्दा धेरै आमा र बैनिसंग बोल्यो । नराम्रो केही भनेन सबै ठिकै छ पैसा अर्को महिना पठाईदिन्छु भन्यो । गाउँका अरु एकादुई साथीहरूलाई पनि फोन गर्यो ।
पैसा थोरै बाकी रहेपछि एकादुईलाई मिसकल हान्यो । तलब थापेको दिन छुट्टीको चलन रहेछ दिनभरी नै आरामले बितायो । तर छुट्टिको दिन उसलाई गाउँघरको सम्झनाले अरु दिन भन्दा झन धेरै सतायो ।
साँझतिर भियतनामीहरुले कताबाट हो एउटा मरनच्यासे खुईले कुकुर ल्याएर काटेर रमाइलो गर्न थाले । कुकुरको काचो खुन मासु र लादिले सारा ब्राह्मण दुर्गन्धमय भयो । त्यो देखेर उ हत्तपत्त भागेर कोठा भित्र गयो र सिरक ओडेर गुटुमुटु भएर सुत्न खोज्यो तर सकेन । काटी सकेपछि कोठै नजिक भान्सामा कुकुर पाक्न लाग्यो ।
पाक्दै गरेको कुकुरको मासु झन थामी नसक्नु गरि उसको नाकैमा ह्वास्स गनायो । त्यो रात बडो कष्टले कट्यो उसको । पानी सम्म खान दिग्मिग लाग्यो उसलाई ।
भोलिपल्ट बिहान सबै उठे तर उ उठेन । रिनको पहाड र सपनाहरूको चाँङको बिचमा महिनाभरीको त्यत्रो मेहनतको कमाई तिनसय रिंगेट कठोर यतार्थ थियो । सपना र यथार्थ बिचको छिचोली नसक्नुको दुरी देखेर अत्यास मानिरहेका झै लाग्ने उसका आँखा तमिल सुपरभाइजर उठाउन जादा खुल्लै थिए ।
दाईने हात द्ब्रे छाती माथी थियो । मुडो लडेजस्तो निस्प्राण लडेको उ आफ्ना सपना र दाइत्वको बोझबाट मुक्त भए झै देखिन्थ्यो । सबैले पालैपालो चिहाएर हेरेपछि सबै नै उ मरिसकेको साझा निस्कर्षमा पुगेका थिए ।
त्यसको केही दिनपछि मलेसियामा एक नेपालीको मृत्यु शिर्षकमा उ समाचारको बिषय भएर आयो अनि सामाजिक संजालहरुमा दर्जनौ पटक उ समाचारको रुपमा बाडियो । पढियो ।अनि उसले कमेन्टमा RIP भन्ने तीन अक्षरको अग्रेजी श्रद्धाञ्जली प्रसस्त मात्रामा पायो र सधैंका लागि उसको कथा सकियो ।
(स्रोत : Kantipath.com)
This entry was posted in नेपाली कथा and tagged Santosh Chimoriya. Bookmark the permalink.
नेपाली काव्य (7,624)
भण्डार कोठा Select Month January 2018 (121) December 2017 (338) November 2017 (314) October 2017 (320) September 2017 (329) August 2017 (349) July 2017 (447) June 2017 (357) May 2017 (381) April 2017 (254) March 2017 (304) February 2017 (261) January 2017 (499) December 2016 (535) November 2016 (381) October 2016 (351) September 2016 (354) August 2016 (269) July 2016 (245) June 2016 (154) May 2016 (166) April 2016 (238) March 2016 (551) February 2016 (539) January 2016 (574) December 2015 (697) November 2015 (464) October 2015 (245) September 2015 (220) August 2015 (215) July 2015 (320) June 2015 (125) May 2015 (118) April 2015 (181) March 2015 (224) February 2015 (122) January 2015 (113) December 2014 (138) November 2014 (109) October 2014 (107) September 2014 (114) August 2014 (216) July 2014 (125) June 2014 (119) May 2014 (152) April 2014 (213) March 2014 (96) February 2014 (202) January 2014 (147) December 2013 (123) November 2013 (118) October 2013 (112) September 2013 (283) August 2013 (530)